यो के मतलब हुन्छ जब रिपोर्टरहरू बिरालो लुकाउँछन्?
एक हरा एक विशेष विषय वा विषय क्षेत्र हो जसले रिपोर्टर कवर गर्दछ। धेरैजसो पत्रकारहरू प्रिन्ट र अनलाईन समाचारमा काम गरिरहेका छन्। एक रिपोर्टरले धेरै वर्षको अवधिको लागि एक विशेष हराउन सक्छ।
केहि भन्दा आधारभूत बीटहरू, समाचार सेक्शन, पुलिस , अदालत , शहर सरकार र स्कूल बोर्डमा समावेश गर्दछ । कला र मनोरञ्जन खण्ड पनि चलचित्रहरू, टिभि , प्रदर्शन गर्ने कला र अन्यमा कवरेजमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
खेलकुद पत्रकारहरू आश्चर्यचकित भएनन्, फुटबल, बास्केटबल, बेसबल र त्यसमा विशेष बिरालोलाई तोकियो। विदेशी संस्थाहरूसँग पर्याप्त मात्रामा समाचार संस्थाहरू जस्तै एसोसिएटेड प्रेस , ले पत्रकारहरूसँग प्रमुख संसारका कैपिटलहरूमा लन्डन, मस्को र बेन्जिङमा राखेका छन्।
तर अधिक कर्मचारीहरूसँग ठूला कागजातहरूमा, बिरालो अझ बढी विशिष्ट हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, व्यापार समाचार खण्ड विशेष उद्योगको लागि अलग बिरालोमा निर्माण, जस्तै विनिर्माण, उच्च प्रविधि र यतिमा विभाजित हुन सक्छ। समाचार आउटलेटहरू जुन आफ्नो आफ्नै विज्ञान वर्गहरू उत्पादन गर्न सक्दछन् हुन सक्छ कि पत्रकारहरूलाई हराउन सक्छ जसले खगोल विज्ञान र जैव प्रौद्योगिकीको रूपमा त्यस्ता क्षेत्रहरू समावेश गर्दछ।
एक हरा रिपोर्टर हुनुको लागि थुप्रै फाइदाहरू छन्। पहिलो, बिरालोहरूले पत्रकारहरूलाई अनुमति दिनका लागि अनुमति दिन्छन् जुन उनीहरूको बारेमा धेरै भावुक हुन्छन्। यदि तपाइँ चलचित्रहरू मन पराउनुहुन्छ भने, तपाइँ फिल्मकार आलोचक हुन वा फिल्म उद्योगको आवरणमा हुने मौकामा उत्साहित हुनेछन्।
यदि तपाईं एक राजनीतिक जुटी हुनुहुन्छ भने, स्थानीय, राज्य वा राष्ट्रिय स्तरमा राजनीति लुकाउनु भन्दा केही पनि तपाईंलाई सट्टा गर्नेछ।
एक ढोका पनि तपाईंलाई विषयमा आफ्नो विशेषज्ञता निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ। कुनै राम्रो रिपोर्टरले अपराध कथालाई बाहिर पुर्याउन वा अदालतको सुनुवाईलाई लुकाउन सक्छ, तर अनुभवी ब्युट रिपोर्टरले इन्सुस्ट र बहिष्कारलाई एक तरिकामा थाहा पाउनेछ कि शुरुवात शुरु हुने छैन।
साथै, हराउने समय खर्चले तपाईंलाई हराएको स्रोतहरूको राम्रो संग्रह निर्माण गर्न सक्षम बनाउँछ, ताकि तपाइँ राम्रो कथाहरू प्राप्त गर्न र छिट्टै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
छोटो समयमा, एक संवाददाता जसले एक विशेष हराएको धेरै समय बिताएको छ भने कसैको साथ मेल खाँदैन भन्ने अख्तियारको बारेमा लेख्न सक्छ।
यो सबै पहिचानको नकारात्मक पक्ष यो हो कि एक चोटि कहिलेकाहीं केही समय पछि बोरिंग गर्न सक्छ। धेरै पत्रकारहरू, एक चोटि ढिलाइमा बिताउन धेरै वर्ष पछि, दृश्यहरु र नयाँ चुनौतिहरु को परिवर्तन लाना हुनेछ, त्यसैले सम्पादक प्रायः कवरेज ताजा राख्न को लागी पत्रकारहरु लाई स्विच गर्न।
बीट रिपोर्टिंग पनि समाचारहरू - र केहि समाचार वेबसाइटहरूमा फरक छ - अन्य प्रकारको मिडियाबाट, स्थानीय स्थानीय समाचारहरू। समाचार पत्रहरू, प्रायः प्रसारण गरिएका समाचार केन्द्रहरू भन्दा राम्रो-कर्मचारीले हराएको संवाददाताहरूले कवरेज उत्पादन गर्छन् कि सामान्यतया टिभी समाचारहरूमा कुन कुरा देखा पर्दैन भन्दा बढी पूर्ण र गहन छ।
6 प्रत्यक्ष जीवन घटनाहरूको बारेमा लेखनको लागि सुझाव
यहाँ छ भयानक फीचर कथाहरू पाक कलाका लागि5प्रमुख सामग्रीहरू
समान समय नियम के हो?
यहाँ एक पत्रकारितालाई प्रभावकारी ढंगले हराएर कसरी ढाक्नुहोस्
रिपोर्टरहरू सुरु गर्ने सामान्य गल्तीहरूबाट बच्नुहोस्
यहाँ प्रत्यक्ष समाचार घटनाहरूको विभिन्न प्रकारहरू कवर गर्न उत्तम तरिकाहरू छन्
5 प्रकारको खेलकुद कथाहरू लेख्नका लागि सुझाव
तपाईंको समाचार कथाहरू उज्ज्वल गर्न Verbs र Adjectives कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
वेबका लागि समाचार कथाहरू लेख्ने तरिका
राम्रो सम्पादकहरू विवरणहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ, तर बिग पिक्चर होइन
द्रुत स्वभाव परीक्षण: कण आकार
द्वितीय विश्वयुद्ध: अलार्म युद्ध हाफा
मृरो, बोल्टोट, डोडो - फ्रांसीसी अभिव्यक्तिले बताएको छ
ब्ल्याकबेरी सर्द: लोकगीत मा एक ठंडा स्नैप रोटेड
अरब अमेरिकी धरोहर महिना मनाउने
जेनेट इवानोविच पुस्तकहरूलाई पृष्ठहरू घुमाउन राख्न
1800s सैन्य इतिहास
Pagans र Homeschooling
इतिहास र फोबोस, मार्स 'निकटतम चंद्रमा
2008 ओलम्पिक टोली बनाएको जिम्मास्टहरूको पूर्ण सूची
मरेका लाजरसलाई उठाउँदै
कला अराजक जसले वान गोगको चित्रहरु को पहिलो समीक्षा को सम्झना गरे
शीर्ष5अपमान Comedians
अमूल्य र मनोरञ्जन
PHP filemime () प्रकार्य बारे
SCHNEIDER उपनाम उत्पत्ति र पारिवारिक इतिहास
एक धार्मिक सन्दर्भ मा Taboos
Intercollegiate A Cappella को लागि शीर्ष कलेज
यदि एक गोल्फ क्लब ब्रेक छ भने, म त्यहि राउन्डको बेला यो बदल्न सक्छु?
गोल्फ ग्रीनमा बल चिन्हहरू कसरी मरम्मत गर्ने?
इटालियन इंडिफाइनल लेख - आर्टिकल इंडिटेर्मिनियटि
5 एल्फ मूवी क्वोट्स: प्यारा बडी तपाईं लाई कसरि जीवन प्यार गर्न सिकाउनुहुन्छ
8 हेनरी फोंडा तारांकित फिलिमहरु
Haber-Bosch प्रक्रियाको अवलोकन
11 चुनौतीपूर्ण शब्दहरू 'ए' सँग सुरु गर्दै